Ekpere, Ịnye Ihe, Njikọ Ekpere, Nkebi nke 2 (Ekpere Site na Bible # 262)
TEXT: 2 Ndị Kọrịnt 9: 7-15
7 Onye ™ b®la d∫ka o zubere n'obi ya, ya mere ka ™ nye; ọ bughi iwe n'obi, ma-ọbu ihe di nkpà: n'ihi na Chineke nāhu onye nēnye obi-utọ n'anya.
8 Ma Chineke puru ime ka amara nile ba uba n'iru unu; na unu onwe-unu, mb͕e unu nwere afọ ojuju n'ihe nile, nābabiga ókè n'ezi ọlu nile ọ bula:
9 (dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ b͕asawo ala: O nyewo ndi ewedara n'ala: ezi omume-ya nādigide rue mb͕e ebighi-ebi.
Ma ub͕u a Onye nāgha nkpuru nye onye nāgha nkpuru, nēri kwa nri nye unu nri, me ka nkpuru-unu ba uba, me ka nkpuru nke ezi omume-unu ba uba;
N'ịbụ onye a na-eme ka ọ baa ọgaranya n'ihe ọ bụla iji mee ka anyị nwekwuo afọ ojuju, nke na-eme ka anyị na-ekele Chineke.
N'ihi na nlekọta nke ọrụ a ọ bụghị nanị na ọ na-eweta ihe ndị nsọ na-achọ, kama ọ bụ ọtụtụ ekele nye Chineke;
13 Site na nnwale nke ije ozi a ka ha nēkele Chineke n'ihi ndi nēkwuputa na ha edo onwe-ha n'okpuru ozi ọma nke Kraist, na inye ndi nile di iche iche onyinye ọma;
14 Ma site n'ekpere ha kpere unu, ndi gānọ ogologo oge n'azu unu n'ihi amara nke Chineke nke-uku nime unu.
15 Ekele dịrị Chineke maka onyinye ya a na-apụghị ịkọwa akọwa.
Anyị nọ na ọtụtụ ozi nke akpọrọ "Ikpe ekpere site na Bible: Usoro nke ntụgharị ọ bụla na Amaokwu banyere Ekpere na Bible." Nzube nke usoro isiokwu a bụ iji gbaa gị ume ma kpee ekpere nye Chineke nke Bible. Anyị mere ka ọ pụta ìhè nke ọ bụla n'ime ihe ndị a karịa amaokwu 500 na amaokwu dị na Ekpere Motivator Devotional Bible. Ruo ugbu a, anyị emechala 261 ozi n'usoro isiokwu a.
Nke a bụ ozi # 262 akpọrọ, Ekpere, Ịnye Ihe, Njikọ Ekpere, Nkebi nke 2.
N'akwụkwọ a, anyị na-ahụ ka Pọl na-agba ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt ume inye mkpa nke ndị kwere ekwe nọ na Jerusalem. Ka ọ na-ekpe ikpe ya, ọ na-enye uru anọ dị na ya mgbe ndị Kraịst ji ọchịchọ obi na-egbo mkpa ndị ọzọ - akwụkwọ anọ nke ekpere zara, ọ bụrụ na ịchọrọ. Ọ bụ otu ihe ikwu na ị na-ekpe ekpere banyere ọnọdụ mmadụ, ma ọ bụ ihe ọzọ igosi nchegbu gị site n'inye ma ọ bụ na-eje ozi iji belata nhụjuanya ha. Ekwenyesiri m ike na ndị ajọ ifufe Harvey na Hurricane Irma nwere ekele maka ekpere anyị, mana ha nwere ekele maka ego anyị nyere na ihe anyị na-eziga. Na, dịka akụkọ USA Today na-ekwu na izu a, ọ bụ òtù ndị Kraịst nke na-enye ọtụtụ ọdachi nhụjuanya ala.
Ndị Kraịst bi na Jerusalem enweghị ajọ ifufe iji mesoo ha, ma ha nọ na-eche ịda mbà n'obi n'ihi na e mebiwo ha n'ụzọ dị ukwuu site na ọrụ ha nwere okwukwe na Kraịst n'ime etiti okpukpe ndị Juu. Pọl ch] r] ka ndŽK] rint] nye ihe dŽ mkpà n'etiti NdŽKraist na Jerusalem. Akwụkwọ akụkọ InterVarsity Press na-ekwu na "onyinye enyemaka nke onyinye nke ndị Kọrint nyere aka bụ nke na-eweta mkpa nke Ndị Kraịst Juda. Okwu ahụ a na - akọwa bụ ụkọ ma ọ bụ ụkọ ihe ndị dị mkpa. Na narị afọ mbụ, nke a bụ nri, uwe, na ebe obibi. N'ihi ya, enyemaka e nyere site n'aka ndị Kọrịnt bụ site na mkpa, ọ bụghị okomoko. "
Ọ bụrụ na ndị Kọrint nyere ndị kwere ekwe nọ na Jerusalem, Pọl gwara ha na ha ga-enye "mkpa nke ndị nsọ." Nke a bụ ngọzi mbụ nke inye ndị nọ ná mkpa n'efu. Okwu a bu "choro" ebe a putara "enweghi". Onyinye ego sitere na chọọchị Kọrint ga-ejupụta oghere ndị dị na ndokwa nke ụka dị na Jerusalem. Ha ga-enye ihe ọgbakọ ahụ enweghị. Ma Pọl na-ekwu ọbụna ngọzi ndị ka mma karịa mkpa a na-enye na-eso ọrụ inye ihe.
N'ịga n'ihu na amaokwu nke iri na abụọ, ọ na-ekwu na onyinye ha ga-abụ "ọtụtụ ekele site n'aka Chineke" site n'ekpere. Nke a bụ ngọzi nke abụọ na-enye ndị nọ ná mkpa n'efu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, onyinye ha na-enye ụlọ ụka Jerusalem ga-eto ọbụna karịa ihe ha bu n'uche ma bụrụ nke ga-akpata nkwụpụta ma ọ bụ jupụta n'ekele ekele nye Chineke n'ekpere. Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na Chineke "bi [Ya na ọnụnọ dị na] otuto nke ndị ya." Onyinye nke ụka Kọrịnt ga-eme ka Ndị Kraịst nọ na Jerusalem ghara ikpe ekpere maka mkpa ha ka ha zute, kama iji ekpere "ekele" na-ekpe ekpere maka mkpa ha. Ha ga-ekwu "ekele" nye Chineke.
Ị bụ onye kpatara onye ọ bụla n'enye ekele Chineke n'oge na-adịbeghị anya? Ịbu ihe mere mmadu ji bia n'ekpere n'ekpere kama itinye ekpere n'ekpere? Ọ bụrụ na ọ bụghị, gịnị ma ị malite inye n'efu taa? Inye mkpa onye ọzọ. Gwa ha ihe mere ị ga - eji nwee ekele.
Ka anyị kenye otu mmụọ nke Robert Murray bụ onye dere okwu ndị a:
Onye-nwe-ayi, Gi onwe-gi nāhu onye nēnye obi-utọ,
Onye nwere obi na aka
Na-agọzi n'efu, dịka osimiri
Nke ahụ na-eme ka ala ahụ dị jụụ.
Nye anyi amara nke inye onyinye
Site na mmụọ nke buru ibu na onye nweere onwe ya,
Na ndụ anyị na ndụ anyị niile
Anyị nwere ike ido ya nsọ.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị nọnyere anyị taa, na ị maghị Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dịka Onyenzọpụta gị, ekpere mbụ gị kwesịrị ịbụ ihe anyị kpọrọ Ekpere Mmehie. Akpa, biko ghọta na ị bụ onye mmehie, dị nnọọ ka m bụ, na na ị mebiri iwu Chineke. Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na Ndị Rom 3:23: "N'ihi na mmadụ nile emehiewo ma ghara iru ebube Chineke."
Ugbu a nke a bụ akụkọ ọjọọ, ma nke a bụ ozi ọma ahụ. Jizọs Kraịst kwuru na Jọn 3:16: "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú a, na O nyere ọbụna Ọkpara Ọ mụrụ naanị Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi."
Naanị kwenye n'obi gị na Jizọs Kraịst nwụrụ maka mmehie gị, e liri ya, ma si na ndị nwụrụ anwụ bilie site n'ike nke Chineke maka gị ka i wee nwee ike ịdị ndụ ruo mgbe ebighị ebi na Ya. Kpee ekpere ma rio Ya ka o bata n'obi gi taa, ma O ga.
Ndị Rom 10: 9 & 13 na-ekwu, sị, "Ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta Onyenwe anyị Jisọs, ma ị ga-ekwenye n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị ... N'ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha nke Onyenwe anyị ga-azọpụta. "
Ọ bụrụ na ị kwenyere nà Jizọs Kraịst nwụrụ n'obe maka mmehie gị, e liri ya ma bilie na ndị nwụrụ anwụ, ma ịchọrọ ịtụkwasị Ya obi maka nzọpụta gị taa, biko kpeere m ekpere a dị mfe: Nna dị nsọ bụ Chineke, ana m aghọta na m m bụ onye mmehie nakwa na m mere ụfọdụ ihe ọjọọ na ndụ m. Maka Jisos Kraist, biko gbaghara m nmehie m. Ugbu a ka m ji obi m dum kwenye na Jizọs Kraịst nwụrụ maka m, e liri ya, ma bilie ọzọ. Onyenwe anyi Jisos, biko bata n'ime obi m wee zoputa nkpuru obi m ma gbanwee ndu m taa. Amen.
Ọ bụrụ na ị tụkwasịrị obi na Jizọs Kraịst dịka Onyenzọpụta gị, ị kpere ekpere na ekpere ma jiri obi gị kwupụta ya, m na-ekwusara gị na dabere n'Okwu Chineke, a na-azọpụta gị ugbu a site na Hel na ị ga-aga Eluigwe. Nabata na ezinụlọ nke Chineke! Ekele na ịtụkwasị Jizọs Kraịst obi dịka Onyenzọpụta gị. I meela ihe kachasị mkpa ná ndụ. Maka ozi ndị ọzọ iji nyere gị aka ito eto na okwukwe ọhụrụ gị n'ime Kraịst, gaa Oziọma Light Society.com ma gụọ "Ihe Ị Ga-eme Mgbe Ị Banyesịrị n'Ụzọ". Jizọs Kraịst kwuru na Jọn 10: 9, "Abụ m ọnụ ụzọ, site na m ma ọ bụrụ na mmadụ ọ bụla abata, ọ ga-azọpụta, na ga-aga na na, na-achọta ịta nri."